Skycop caught Ryanair and Passengers win in Lithuania | Airlines
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Airlines » ISkycop ibambe iRyanair nabagibeli baphumelela eLithuania
ISkycop ibambe iRyanair nabagibeli baphumelela eLithuania
I-ithuilvinas eseLithuania U-Alekna, umphathi wezokuxhumana weSkycop ujabule utshele eTurboNews ukuthi uDisemba 23 kufanele amakwe njengosuku lapho ubulungiswa buthumele khona isipho sikaKhisimusi kubagibeli bomoya eLithuania. Uzwa sengathi ubulungiswa benzelwa abagibeli bomoya lapho IRyanair ilahlekelwa yimpi neMigomo Nemibandela yayo engafanele
Kuchaza uSi-kycop iqalise inhloso yokuqinisekisa ukuthi wonke umgibeli oyedwa, onolwazi lokulibaziseka kwezindiza, ukukhansela noma ukubhukha ngokweqile, uthola isinxephezelo sabo ezindizeni. Ithimba lochwepheshe abaqeqeshwe kakhulu abaneminyaka eyi-10 + yokuhlangenwe nakho kwezamabhanoyi, ezomthetho kanye nezezimali lilapha ukukusiza ukuthi uthole isinxephezelo sabagibeli bezindiza ngendlela esheshayo futhi elula kunazo zonke.
Izulu ummeli uNerijus Zaleckas ubelokhu ehlinzeka ngezinsizakalo zomthetho kusukela ngo-2007. Uneziqu ezintathu zemasters ezivela eVilnius, e-Amsterdam, naseLondon, futhi unolwazi ngamafemu abameli ahamba phambili emhlabeni.
UNerijus nozakwabo bahlinzeka ngezinsizakalo zokubambisana, ezentengiselwano, ezomthetho, ezokulwa nokuthembana nezokumangalelwa kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ikakhulukazi esifundeni saseBaltic, e-EU, eBelarus, e-Ukraine naseRussia.
Ngasekuqaleni kwaleli sonto inkantolo yaseLithuania ibone ukuthi iRyanair ayikwazi ukwenqabela abagibeli bayo ukuthi banikeze izimangalo ngaphansi koMthethonqubo 261/2004 kubantu besithathu.
“Abagibeli abadingi ukufaka izicelo ngqo kuRyanair bevumela iSkycop kanye nabameli babo ukuthi bamele intshisekelo yabagibeli abamelene neRyanair. "Abagibeli bakhululekile futhi ukuthi bangavumelana ngezezimali nangeminye imigomo nabantu besithathu ababasizayo ukuthi bathole imali yabo," kusho inkantolo.
Kuleli cala elibhekwayo, abagibeli abafakanga izimangalo ngqo kwiRyanair futhi abalindanga izinsuku ezingama-28 ukuthola impendulo kaRyanair njengoba kushiwo imigomo nemibandela emithethweni ebekwe yiRyanair.
Ngenkathi lo mgibeli enikeza amalungelo abo kanye nesimangalo sabo, iSkycop yaba ngumnikazi wesimangalo. URyanair wenqabile ukukhokha esho ukuthi abagibeli kumele bafake isimangalo ngqo futhi balinde izinsuku ezingama-28, futhi abakwazi ukunika amalungelo abo ukunxeshezelwa.
Inkantolo inqume ukuthi izivumelwano zokwabiwa kwezisebenzi zivumelekile futhi iRyanair kungenzeka ingavimbeli abagibeli ekunikezeni amalungelo abo kunxephezelo uma abagibeli bekholelwa ukuthi ngaleyondlela amalungelo abo azosetshenziswa ngokushesha nangokushesha.
Inkantolo yanezela: “Imigomo Nemibandela evimbela iRyanair ayinabulungiswa futhi ayisebenzi futhi ayisebenzi. Ngakho-ke abagibeli bangenza izivumelwano ze-Assignment futhi akudingeki ukuthi bazifakele izicelo. ”
"Inkantolo igcizelele ukuthi imigomo nemibandela efana neRyanair yephula amalungelo abathengi," kusho uNerijus Zaleckas.
Inkantolo iphinde yathi ngokufaka isicelo nge-imeyili iSkycop yagcwalisa yonke imibandela yokukhokhelwa kwesinxephezelo kanti iRyanair iphoqelekile ukuthi ikhokhe. Kusho ukuthi izinkampani zezimangalo ezifana neSkycop azidingi ukusebenzisa ipulatifomu yokufaka izicelo zeRyanair njengoba empeleni ingakhelwanga nezinkampani ezinjalo.
Kulindeleke ukuthi iRyanair ifake isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Lesi sinqumo siphume ngemuva kokuthi inkantolo efanayo ifake inhlawulo engu-5000 EUR kuRyanair ngokungaziphathi kahle enkantolo. URyanair uzame ukuhlehlisa ukulalelwa kwezinkantolo njalo futhi nganoma iyiphi indlela.
I-Dusit izovula amahhotela amabili amasha e-China
Ibhanoyi lomgibeli elinabantu abangu-100 lishayise isakhiwo esinezitezi ezimbili
30 amasha e-UK, Italy, Switzerland, Germany, France...
Isethulo sikaNgqongqoshe u-Bartlett mayelana neSifundazwe...